ulwazi 1. Gcobisa
Kukho ulwazi oluninzi ngokubanzi ekufuneka baphume iikhampasi zekholeji. imiqondiso yedijithali ukwazi ukubonelela ikhaya kuninzi kuyo. Oku kubandakanya:
ezemidlalo zemidlalo kunye ezinde;
ukwakha imihla kuvalwa namaxesha;
iikonsathi kunye nezinye iziganeko ezizodwa
iibhodi menu digital amaziko zokudlela; yaye
iinkomfa kunye izithethi ezizodwa
2. Bethelela ukufunda
Namhlanje Iikholeji ezininzi zixhotyiswe neeprojektha. imiqondiso yedijithali ibonelela ngamathuba amaninzi ukusebenzisa multimedia ukuphucula izifundo. Oonjingalwazi ukubonisa izilayidi ecacisa iingongoma ezibalulekileyo okanye adlale iividiyo ezinxulumene umxholo.
Abo bakhathazekile ukuba abafundi ukuze baphulaphule le ntetho ukuba babe screen phambi kwabo babe nto yakoyika. Uphando lubonisa ukuba ukubonisa izilayidi PowerPoint rhoqo ngexesha izifundo akukho nefuthe elibi kwiziphumo zebanga lokugqibela abafundi '. A icebiso ngokukhawuleza: Akukho manqaku bullet ngaphezulu ezintathu kunye namagama 20 slide yeyona ndlela ilungileyo yokwenza ukuba ulwazi kufundwa ize igcinwe.
Kwama-40 ekhulwini izikolo zingenazo imiyalelo ngento ntoni kaxakeka exhonyiweyo iilebhu zabo zokuhlala. izikolo nnangaphezulu bayasilela ukuthumela ezo imiyalelo kwezinye izakhiwo. Noko ke, umfundi okanye ikhono okanye utitshala ingaba naphi na xa kusehla intlekele. baya kufumana njani ulwazi? uya bayazi njani ukuba benze ntoni?
imiqondiso yedijithali ndawonye ivumela iikholeji neeyunivesithi ukufumana igama kunini, baye naphi ekhampasini. Zemenyu nga kukhazimla ngemibala ngqindilili ukutsala ingqalelo tufwile olungxamisekileyo kunye nokunika imiyalelo apho abafundi kufuneka uye yaye oko kufuneka bakwenze ukuze sikhuseleke. Logama nje kukho amandla kunye intanethi ukufikelela, imiqondiso zihlaziywe nangoko kwaye ukude.